"Waan Fiicanahay, Kama Baaqdo La Kulanka Jadwalkayga, Kubaddana Waan Wareejiyaa" - Pele Oo Beeniyey War Uu Wiilkiisu Kaga Dayriyey Caafimaadkiisa - Gool24.Net
“Waan Fiicanahay, Kama Baaqdo La Kulanka Jadwalkayga, Kubaddana Waan Wareejiyaa” – Pele Oo Beeniyey War Uu Wiilkiisu Kaga Dayriyey Caafimaadkiisa
Halyeygii reer Brazil ee Pele ayaa si buuxda uga hadlay xaaladdiisa caafimaad, maalmo kaddib markii uu hadallo laga murugooday ka sheegay wiilkiisa Edinho oo waraysi uu bixiyey ku tilmaamay in Aabbihii uu ka xishoodo inuu dibedda uga soo baxo guriga, sabab la xidhiidha caafimaadkiisa oo sababay inay niyaddu ka jabto.
Pele oo ay da’diisu bisha October noqon doonto 80 jir, waxa uu Khamiistii soo saaray war-saxaafadeed uu kaga jawaabayay hadallada uu wiilkiisu ka sheegay caafimaadkiisa, waxaanu tilmaamay in uu ku hawlan yahay soo saarista muuqaal documentary ah oo usbuucyadii ugu dambeeyeyna laga duubay muuqaallo, laakiin aanay waxba ka jirin wararka sheegaya in aanu guriga ka bixin.
“Waad ku mahadsan tihiin ducooyinkiina iyo walaaciiniiba. Waan fiicanahay. 80 jir aayaan noqonayaa sannadkan, waana iska caadi in marka ay dadku da’daas gaadhan ay maalmo wanaagsan iyo kuwo xun ba soo maraan.” Ayuu Pele ku bilaabay war-saxaafadeedkiisa.
Bayaankan oo aan lagu xusin magaca wiilkiisa, sidoo kalena aan lagu sheegin inuu jawaab ka yahay hadalladii uu warbaahinta ka sheegay, haddana waxa qodob-qodob loogu dul-istaagay dhamaan kelmadihii uu Edinho ka sheegay caafimaadka aabbihii.
“Ma baqanayo, si kalsooni leh ayaanan u sameeyaa waxa aan qabanayo. Toddobaadkii hore, waxa aan ku faraxsanahay inaan istuudiyaha kula kulmay madaxweynaha xidhiidhka kubadda cagta Brazil, halkaas oo aaan ku duubayey documentary. Bishii hore, laba jeer ayaan galay hawlo sawirro qaadis ah, waxaanan isticmaalay sawirkayga iyo muuqaalkayga.” Ayuu mar kale Pele ku yidhi war-saxaafadeedka.
Halyeyga reer Brazil waxa kale oo uu sheegay in dhacdooyin soo aaddan uu ka qayyb-geli doono, isla markaana aanu ka baaqanin inuu la kulmi waqtiyadiisa mashquulka ah, waxaanu yidhi: “Waxa qorshaysan dhawr dhaco oo soo socda. Kama baaqdo inaan la kulmo ballamahayga aan had iyo jeer ku mashquulsanahay. Waxaan sii wadaa inaan aqbalo xaddidaadda jidhkayga sida ugu suurtogalsan, waxaanu dareenkaygu yahay inaan sii wado wareejinta kubadda. Allah ha idin karaameeyo dhamaantiin.”
Hadalka Pele ayaa waxa uu daba socdaa, waraysi uu Isniintii wiilkiisa Edinho siiyey GloboEsporte.com, kaas oo uu sheegay in aabbihii aanu socon karaynin illaa garbaha la qabto ama lagu fadhiisiyo kursiga dadka laxaadkoodu dhiman yahay, isaga oo xusay in aanu si habboon uga soo kabanin dhiilka misigta oo laga beddelay.